Maxay ka dhigan tahay in Khayre musharraxnimadiisa soo mariyo baraha bulshada? | Xaysimo
Home War Maxay ka dhigan tahay in Khayre musharraxnimadiisa soo mariyo baraha bulshada?
Maxay ka dhigan tahay in Khayre musharraxnimadiisa soo mariyo baraha bulshada?
Raysalwasaarihii hore ee Soomaaliya, Xasan Cali Khayre ayaa baraha bulshada soo mariyey in uu yahay musharrax madaxweyne doorashada soo aaddan ee la filayo horraanta sannadka danbe inay ka dhacdo Soomaaliya.
Waxaana hadda konton maalmood laga joogaa markii baarlamaanka Soomaaliya hab muran dhaliyey ay sheegeen inay kalsoonidii kala noqdeen isaga iyo xukuumaddiisaba. Muddo yar kaddibna isla muuqaal uu barihiisa bulshada soo dhigay Khayre ayuu ku sheegay in wixii ka dhacay Golaha Shacabka ay aheyd sharci-darro isla markaana aan loo marin hab-raaca saxda ah ee xil ka qaadista xukuumadda.
Waxa uu ku adkaystay in xil ka qaadistiisa aysan xitaa ku jirin ajandihii kulanka Golaha Shacabka balse uu hadda qaatay in uu iscasilo isaga oo sida uu sheegay u tudhaya dalka isla markaana aan dib loogu laaban burbur iyo dhibaato.
Khudbaddaas oo xilligaas baraha bulshada si weyn ugu baahday, mar kale ku dhawaaqistiisa musharraxnimo ee uu soo mariyey baraha bulshada ayaa dhalisay hadal hayn kale.
Sida caadiga ah musharaxiinta u sharraxan boosaska siyaasiga ah ee Soomaaliya ayaa badanaa ku shaaciya xaflad ay ka soo qayb galaan dad aad u fara badani, oo lagu qabto madal ama goobaha huteellada oo kale. Khayre se waa uu ka duwanaa oo waxa uu arrintaasi soo mariyey baraha bulshada isaga oo soo qoray:
“Hadda oo la sugayo hannaan loogu gudbo muddo xileed cusub ee dowladda Somaliyeed, waxaan fikir iyo talo wadaag dheer kaddib halkan idinkula wadaagayaa musharaxnimadayda jagada Madaxwaynaha JFS. Anigoo si dhab ah u fahamsan fursadaha iyo caqabadaha la xiriira hoggaaminta iyo waxqabadka dalkeennu u baahan yahay maanta iyo mustaqbalkaba, waxaan markale isu soo qaddimayaa in aan dadkayga ugu adeego si ay ku dheehan tahay karti, hufnaan iyo daacadnimo.”
Dadka wax iska weydiiyey arrintaas waxaa ka mid ahaa, Xildhibaan Mahad Salaad oo bartiisa Twitter ku soo qoray qoraal sidan u dhignaa, isaga oo is weydiiyey sababta uu xaflad u qabsan waayey.
“Degdegga iyo cabsida ka muuqatay qoraalkii Kheyre xalay soo dhigay facebook-giisa ee lala sugi waayay xaflad in loo dhigo maxaa loo fasiran karaa?! Nin magaaladii uu deganaa, Ra’iisul Wasaare ku noqday hal habeen xaflad ku dhigan waayay, sidee dal iyo dad in uu hoggaamiyo loogu aaminayaa?
Adan Aw Xirsi oo ka mid ah siyaasiinta aad ka u isticmaala baraha bulshada bulshada, soona noqday wasiir maamulka Jubbaland ah, isla sida oo kalena falanqeeya ayaa isna ku tilmaam muhiimadda Khayre uga dhigan tahay baraha bulshadu inayba yihiin, halkii laga magacaabay.
“Xasan Cali Khayre waa raysal wasaare laftiisa barta Twitter-ka lagu magacaabay. Sidaa darteed, yaab keeni mayso in uu murashaxnimadiisa madaxweynennimo isaguna baraha bulshada ka shaaciyo. Hase yeeshee, qaabka iyo meesha uu murashaxnimadiisa ku shaaciyey tilmaan wax ku ool ah kama bixin karto loo-qaateenninada iyo saamaynta murashaxnimadiisa.”
Dhanka kale waxaa BBC-du la xidhiidhay mid ka mid ah hawl wadeennada la shaqaynaya Khayre ee ka ag dhaw, oo magaciisa ka gaabsayd, ayaa sheegay in dhawr qodob ay ku qasbeen inay sidan ay yeelaan waxaana ka mid ah:
Qoraalka sawirka,Khayre waxaa uu ka mid ahaa saxiixayaashii heshiiskii Dhuusamreeb
“Ku dhowaad laba bil oo Ra’iisul Wasaare la soo magacaabi waayay, Xasan Cali Khayre waxa uu waayay cid uu xilka ku wareejiyo, talo ahaan waxaa la siiyay is sharrixiddiisa uu soo koobo oo uu ku dhawaaqo.”
Waxaa sida oo kale ay sheegeen in xaaladda Karoona ee dalku ku jiraa ay saamayn ku yeelatay inay dad badan meel isugu keenaan oo xaflad weyn ay qabsadaan.
“COVID-19: Xukuumaddii Xasan Cali Khayre waxay mamnuucday kulamada waaweyn, iyada oo maamulka gobolka Banaadir uu dhowaan cusbooneysiiyay go’aankaas iyada oo laga baqayo in wejiga labaad ee Covid-19 inuu dalka ku dhufto mar labaad.”
Waxaana uu intaasi masuulka ka tirsan hawlwadeennada khayre in sababta kale hawshan keentay ay tahay: “Xasan Cali Khayre oo waqti badan ku soo qaatay dalalka Galbeedka, kulama-dhaqameedka Soomaalida ee laga xadreeyo, madaxdana loo heeso waxa uu arkaa hab qadiim ah oo laga tagay wax badanna aan ku soo kordhinin siyaasada, sidaas darteedna ay uga filan tahay inuu si rasmi ah isu qaddimo.”
Dadka kale ee ka falceliyey musharraxnimada Khayre waxaa ka mid Cabdiraxmaan Cabdishakuur, oo ah musharraxa madaxweyne ee xisbiga Wadajir.
“Musharraxa cusub waan soo dhoweynaynaa, laakiin dhiibistii Qalbidhagax, weerarkii 17 Dec ee xarunta Wadajir, xil ka tuuristii Prof Jawaari, safar xannibkii labada madaxweyne iyo cunna qabateyntii Kismaayo masuuliyaddeeda ha qaato ama meel ha saaro. Mise isagoo og ayuusan haddana ogeyn?!” ayaa ku soo qoray bartiisa baraha bulshada.
Marka se loo eego dhanka faallooyinka laga bixiyey ku dhawaaqista musharraxnimada Khayre, waxay u muuqdaan in dad badani soo dhaweeyeen. Halka kuwa kalena ay durba sii mucaaradeen. Halka qaarna ayba kaftan ka dhigteen iyaga oo soo qaadanaya qaar ka mid ah ereyo ku jiray khudbadihii Khayre jeedin jirey.
Marka loo fiiriyo miisaan ahaan qolyaha illaa hadda caddaystay musharraxinimadooda intee gaadhsiisan yahay Khayre?
Dad badan ayaa qaba in Khayre maadaama uu soo noqday raysal wasaare oo tartan xooggan ku soo kordhin doono ololaha doorashada soo aaddan, isla markaana uu ka mid ka noqon siyaasiinta hadal haynta badan dhalin doona, hadday mucaaradad tahay iyo hadday olole tahayba.
Aw Xirsi ayaa se isagu qaba in aanay hawshu sidaa u cuslayn oo uusan Khayre waxba la gaar ahayn:
“Soomaaliya, lama sii saadaalin karo miisaanka murashax gaar ah, waxaase la cabbiri karaa xajmiga xerta uu murashax waliba miiska la iman karo. Markii xaalka raysal wasaare Khayre cabbirkaa la saaro, ma cadda inta uu ka heli kari doono taageerayaasha Nabad iyo Nolol oo u muuqda kuwo uu udub dhexaad u yahay Madaxweyne Farmaajo oo isagaa un ku dul wareega. Tusaale ahaan, taageerayaasha Nabad iyo Nolol waxay horay u dayriyeen tiro siyaasiyiin ah oo kale oo markii hore la-mulkiileyaal u muuqday.” ayuu yidhi
Waxaana uu intaasi ku daray in sida oo kalena aan laga fili karin mucaaradkii kale inay taageero u muujiyaan ayna mucaaradi doonaan isla isagaba.”Dhinaca kale, mucaaradkii saddexda sano iyo barka naqdinayey dawladdii uu Khayre raysal wasaaraha ka ahaa, lagama rajeyn karo in ay horay isagii oo xafiiska ka soo tegay ka xambaaraan oo ay murashax madaxweyne ka dhigtaan. Taa micnaheedu ma aha in ay adag tahay in uu raysal wasaare Khayre yeesho miisaan shakhsi ah oo ay siyaasiyiintu qaar danahooda ka dhex arki karaan”
Khayre: magacaabistiisii iyo xil ka qaadistiisii
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 23-kii February xilka Ra’iisul Wasaaraha u magacaabay Xasan Cali Khayre. Waxay ahayd maalin ka dib markii xilka madaxweynaha loo dhaariyay.
Khayre ayaa haysta dhalashada dalka Norwey. Ka hor magacaabistiisii hore uma soo qaban xil siyaasadeed, balse wuxuu ahaa ganacsade iyo qof ka soo shaqeeyay arrimaha gargaarka Soomaaliya.
Wuxuu codka kalsooni ah ka helay 231 xildhibaan, 1-dii bishii March ee 2017-kii. Golihiisii Wasiiradana waxaa la ansixiyay 21-kii isla bishaas.
Muddadii uu xilka hayay, isaga iyo madaxweynaha waxay ahaayeen laba qof oo si wayn loo arkayey inay u wada shaqaynayaan, waxayna ku celcelin jireen in muddo xileedka dowladda ay isla dhameysan doonaan.
Khayre wuxuu ahaa ra’iisul wasaarihii ugu waqtiga dheeraa ee Soomaaliya soo mara 20-kii sano ee la soo dhaafay.
Arrimaha uu wax ka qabtay waxaa ka mid ah diiwaangelinta ciidamada. Sidoo kale wuxuu ballan qaaday la dagaallanka musuqmaasuqa, xoojinta amniga iyo dhaqaalaha iyo dardargeklinta shaqooyiinka dowladda.
Balse, dadka ka faallooda arrimaha siyaasadad waxay sheegayaan in madaxweyne Farmaajo iyo Khayre ay ku kala aragti duwanaayeen qabashada doorashada, oo hadda waqti kooban uu ka dhiman yahay.
Labada masuul ayaa ka qeybgalay shirkii Dhuusamareeb oo ay ku sugnaayeen madaxda maamul Goboleedyada kaas oo looga hadlay in doorashada waqtigeeda lagu qabto.
Balse, maalmo ka dib shirkaas, 25-kii bishan July, baarlamaanka Soomaaliya ayaa u codeeyay mooshin aan horey loo sii shaacin, taas oo muran iyo buuq ka dhex dhalisay xarunta baarlamaanka.
Guddoomiyaha Baarlamaanka, Maxamed Mursal ayaa ku dhawaaqay xil ka qaadista Khayre taas oo madaxweynaha uu aqbalay isla markiiba.
Sawirro: Wararkii u dambeeyey diyaarad ku dhacday garoonka Aadan Cadde
Farmaajo oo shaaciyey laba sabab oo uu uga tanaasulay doorasho qof...
Maxaa kala qabsaday gabadh wariye ah oo aan xijaabnayn iyo hoggaamiye...
Axmed Madoobe oo soo dhaweeyay magacaabida Ra’iisulwasaaraha cusub
Kheyre oo soo dhoweeyey heshiiska ay gaareen Madaxweyne Farmaajo iyo madax...
Madaxweyne Farmaajo iyo madax goboleedyada oo ku heshiiyey 15 qodob
Al-Shabab oo 10 sano kadib xil ka qaadis ku sameysay Yuusuf...
Qaraxyo wadada loo dhigay gudoomiyaha maxkamada ciidamada qalabka sida
Maxaa laynaya shimbiraha Mareykanka?
Daawo Salaad Cali Jeelle oo si adag ugu jawaabay Hogaanka Madasha...
Wasiirka Ganacsiga: Saylici wuxuu yidhi Xisbiga KULMIYE aniga ayaa leh laguma...
Hoggaamiye Xirsi iyo Siyaasi Maxamuud Xaashi oo kulmay iyo Cali Siciid...